Jaamacaddii ugu horeysey oo laga hirgaliyey Degmada Buur-hakaba ee gobolka Baay | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Jaamacaddii ugu horeysey oo laga hirgaliyey Degmada Buur-hakaba ee gobolka Baay
Jaamacadaan cusub ee laga daahfurey Degmada Buurhakaba, waxay noqoneysaa middii ugu horeysay Taariikhda Degmadaas ee heer Caalami ah oo ay wax ku baran doonaan ardeyda dhameysatey waxbarashada dugsiyada sare ee xiliyadii hore ay waxbarasho Jaamacadeed u weydiisan jireen magaalooyinka Gobolada kale.
Munaasabadda daahfurka Jaamacadda Banooda waxaa goobjoog ka ahaa, masuuliyiin katirsan Wasaaradda Waxbarashada K/Galbeed, Gudoonka waxbarashada Degmada Buurhakaba, maamulka & Guddoonka Jaamacadda, Maamulka Degmada iyo Marti sharaf kale.Ugu horeyn waxaa munaasabadda Khudbado dhiiragelin ah kasoo jeediyay Masuuliyiin kasocdey maamulka Degmada iyo Gudoonka waxbarashada Degmada Buur-hakaba.
Shaafici Maxamed Cusmaan oo kamid ah maamulka Jaamacadda oo halkaas ka hadley ayaa tilmaamey muhiimada ay leedahey in Degmada Buurhakaba laga furo markii ugu horeysay Jaamacadda oo loogi magacdarey Banooda University.
Gudoonka Jaamacadda Banooda Ibraahim Cali Mashuur ayaa faafaahiyey marxaladihii kala duwanaa ee loosoo marey, iyo Sababaha loo aasaasey.
Jaamacadda Banooda ee dhowaan laga daahfurey Degmada Buurhakaba waxey dabooli doontaa baahiyaha waxbarasho ee Bulshada Degmadaas kunool, waxeyna ardeyda dhameysay waxbarashada Dugsiga sare ay horey u aadi jireen Magaalooyinka iyo Gobolada kale ee Dalka.
Jaamacaddii ugu horeysey oo laga hirgaliyey Degmada Buur-hakaba ee gobolka Baay was last modified: June 22nd, 2022 by Siid Cali
Soomaali dil & dhaawac loogu geystay webi mara deegaanka Canfarta
Haweeneey hal meel ku dishay 6 Carruur ah oo ay dhashay
Deni oo toddobaad ka dib lagu arkay fagaareyaasha (SAWIRRO)